मिडिया > जर्नल उत्तराधिकार > पत्रिका उत्तराधिकारी 2018-03 > ख्रीष्टमा रहनुहोस्
महान लेखक मार्क ट्वेन एक रोचक कथा लेखे। उनले भने कि एक दिन जब टाढा देशका राजा र रानीले आफ्नो नवजात शिशुलाई शाही अस्पतालबाट घर ल्याउँदै थिए, तिनीहरूको गाडी एउटा गरीब भिखारीको गाडीमा दुर्घटनाग्रस्त भयो। ती गरिबले आफ्नी स्वास्नी र नवजात शिशुलाई सुँडेको घरबाट नम्र गाडीमा उसको घरमा लगे। घटनाहरूको अलमल्लमामा, दुई जोडीहरूले गल्तीले बच्चालाई बदले र यसरी सानो राजकुमार भिखारीको घरमा उनी र उनकी श्रीमतीले हुर्काउन पुगे।
जब बच्चा ठिटो ठुलो भयो, उसलाई सडकमा गएर खाना माग्नु प .्यो। यो थाहा नपाईकन, यो वास्तवमा उसको आफ्नै सडकहरू थियो जसमा उनले बिन्ती गरे किनभने तिनीहरू उनका वास्तविक बुबा राजाका थिए। दिनदिनै उनी महलमा गए र त्यहाँ खेलिरहेको सानो केटो फलामको बारमा हेरे र आफैलाई भने, "यदि म राजकुमार हुँ भने।" अवश्य पनि ऊ राजकुमार हुँ! तर उनी यस तथ्यलाई जान्दछन्। केटाले गरिबीको जीवन बिताए किनभने उनी वास्तवमै ऊ को हो भनेर जान्दैनथ्यो किनकि वास्तवमा उसलाई उसको बुबा को हो भनेर थाहा थिएन।
तर यो कुरा धेरै इसाईहरूलाई पनि लागू हुन्छ! जीवनमा तपाई जस्तो को हुनुहुन्छ थाहा नपाई सजिलैसँग जान सजिलो छ। हामी मध्ये कोहीले वास्तवमै "तिनीहरू को हौं" भनेर फेला पार्न समय लिएका छैनौं। हामी आत्मिक रूपमा जन्म भएको दिनदेखि हामी राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभुका छोराहरू र छोरीहरू भएका छौं! हामी शाही उत्तराधिकारी हौं। जब तपाईं सोच्नुहुन्छ कि हामी प्रायः आत्मनिर्भर आध्यात्मिक गरिबीमा बाँचिरहेका छौं र परमेश्वरको अद्भुत अनुग्रहको धनलाई रोक्दछौं भने। त्यो सम्पत्ती त्यहाँ छ कि हामी जानेर यसको मजा लिन्छौं वा गर्दैनौं। धेरै विश्वासीहरू एक हदसम्म "अविश्वासीहरू" हुन्छन् जब जब परमेश्वरले उहाँको वचनलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा आउँछ जब उनले हामीलाई येशूमा को हुनुहुन्छ भनेर बताउँछन्।
पवित्र आत्माले सिकाउने कुरा सधैं येशूसँग पूर्णरूपमा हुनेछ। उहाँ हाम्रो उद्धारकर्ताले सिकाउनुभएको कुनै पनि कुराको विरोधाभास गर्ने वा आदानप्रदान गर्ने छैन। पवित्र आत्मा सधैं ख्रीष्ट केन्द्रित हुन्छ। येशू र पवित्र आत्मा सधैं एकमत हुनुहुन्छ।
हाम्रो उत्तम प्रयासका कारण परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश सफल हुँदैन, तर पूर्ण जीवन चाहिन्छ। हामी आध्यात्मिक तवरमा जन्मनु पर्छ। यो नयाँ सुरुवात हो, नयाँ जन्म। यो पुरानो जीवनबाट स्वतन्त्र छ। यो हामीमा पवित्र आत्माको काम हो। न त हाम्रो आफ्नै शक्ति वा आफ्नै बुद्धिको माध्यमबाट हामी परमेश्वर संग सही सम्बन्ध स्थापना गर्न सक्छौं। हामी परमेश्वरको परिवारमा प्रवेश गर्छौं जब परमेश्वरको आत्माले मौलिक रूपमा हामीलाई नयाँ बनाउँछ। त्यो बाहेक त्यहाँ कुनै ईसाईमत छैन। पवित्र आत्माले हामीलाई आत्मिक जीवन दिनुहुन्छ। यो एक व्यक्ति मा यो सिर्जना गर्न हताश मानव प्रयासको साथ शुरू हुँदैन। यसको व्यक्तिगत आयसँग कुनै सरोकार छैन। हामी यससँग संघर्ष गर्दैनौं। हामी परमेश्वरको अनुग्रह कमाउन सक्दैनौं। येशू ख्रीष्टको सुसमाचार प्रचार गर्न सक्षम हुनु कस्तो सुअवसर हो। हामी केवल परमेश्वरले ख्रीष्टमा गरिसक्नुभएकाहरू मात्र साझा गर्दैछौं। पवित्र आत्मा सत्यको आत्मा हो र उसले येशूलाई बाटो, सत्य र जीवनको रूपमा प्रकट गरेको छ। हामी अचम्मै धन्यका छौं! परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ, हामीसँग र हामी मार्फत काम गर्नुहुन्छ।
स्यान्टियागो लेन्गे द्वारा